Tranny सेक्स खेल: खेल हिजडा अश्लील खेल अब
आउन अन्वेषण Tranny सेक्स खेल!
सबैलाई थाह छ, कि खेल छन्, ठूलो व्यापार, तर म यो भन्दै बिना जान्छ भने तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ के खेल छ, आफ्नो विकल्प छन् अविश्वसनीय सीमित छ । जबकि हामी छौं पुरा पक्का छैन किन ठूलो नाम स्टूडियो छैन अँगाले यो शैली को शीर्षक, हाम्रो टीम निर्णय गरेको छ कि यो पतन मा अमेरिकी माथि टिप्न सुस्त! किन कि म खुसी छु कि घोषणा गर्न हामी गर्न ढोका खोल्ने Tranny सेक्स आधिकारिक खेल! यो एक लामो समय भएको, आउँदै तर पछि निजी बिटा परीक्षण को डिसेम्बर मा 2020, यो थियो बेइमान समय हामी अनुमति सबैलाई प्राप्त गर्न कार्य मा., ध्यान दिनुहोस कि यहाँ टीम मा काम गरिएको छ परियोजना को अगस्ट देखि 2017, त्यसैले हामी गर्नुभएको थियो तीन वर्ष सँगै राख्न एकदम क्यास को smutty शीर्षक । ओह, र तपाईं छैन भने, यो बाहिर समझ देखि शीर्षक: सबै तपाईं पाउन छौँ भित्र Tranny सेक्स खेल थिम्ड वरिपरि किन्नर, थापेको, femboys र यति मा । यदि यो समावेश chicks with double – जे कन्फिगरेसन छ – तपाईं पाउन छौँ, यो भित्र! अब त: कुरा गरौं एक सानो बिट को सद्गुण बारेमा हाम्रो सानो परियोजना र गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ किन मा आउन । कहिलेकाहीं, यो लिन्छ एक सानो मीठा कुरा प्राप्त गर्न जस्तै मान्छे तपाईं ढोका मा!
Right now, we ' re literally दिने दूर पहुँच गर्न Tranny सेक्स खेल: तपाईं तिर्न आवश्यक छैन लागि खाता र तपाईं कहिल्यै हुनेछ या त! The reason for this is because we wanted to go down the path of दिने मान्छे पहुँच मा मुक्त लागि राख्न आदेश मा हामीलाई हाम्रो औंलाहरूको । देख्न, समस्या जस्तै शीर्षक संग Cyberpunk 2077 छ कि खरिद गरेपछि तपाईं खेल मा, कि यो हो – हतार गर्न कुनै आवश्यकता फिक्स, माथि लोड नयाँ सामग्री वा अरू केहि. यो sucks, तर संसारमा हामी आफूलाई पाउन., तर, हामी याद शीर्षक गरिएको छ जो वरिपरि एक लामो समय को लागि, यस्तो CS:GO, महापुरूष को लिग र निर्वासनमा को मार्ग रोजेका सबै लागि दिने आफ्नो खेल दूर मुक्त लागि. यो छैन भने राम्रो, they don ' t get paid. धेरै सरल अवधारणा, तर हामी जस्तै को पंक्तिबद्ध प्रोत्साहन – यो पूंजीवाद, बच्चा! हेर, म छैन भनेर थाह सबैलाई बाहिर त्यहाँ ख्याल राख्नुहुन्छ हाम्रो तर्क र तपाईं बस खेल्न चाहनुहुन्छ हिजडा अश्लील खेल, तर मलाई एक क्षण व्याख्या गर्न कसरी भयानक हामी हो, ठीक? राम्रो! म कुरा छौँ सट्टा खेल को सिद्धान्त पछि तिनीहरूलाई । दु: खी हुनुको लागि बोरिंग, वा जे.
खेल मा Tranny सेक्स खेल
लेखन को समय मा, यो खेल को पुस्तकालयको हामी कूल 15: खराब छैन, eh? निश्चित, यो गर्न जा छैन प्रतिद्वंदी बाफ, तर सम्झना कि यी सबै खेल थिम्ड वरिपरि transsexuals, किन्नर र थापेको. You ' ll पाउन सङ्घर्ष कुनै पनि गन्तव्य मेल गर्न सक्छन् कि हामीलाई मात्रा मा – एक्लै गरौं गुणवत्ता! म पनि जोड गर्न चाहनुहुन्छ कि हरेक एकल शीर्षक तपाईं यहाँ पाउन छ 100% उत्पादित मा-घर हाम्रो स्टूडियो द्वारा. कुनै तेस्रो-पक्ष कुनै लाइसेन्स छ – यो प्रधानमन्त्री, अनन्य transsexual अश्लील खेल that you will not find anywhere else., हामी प्रेम भन्ने तथ्यलाई हाम्रो खेल हो, त्यसैले राम्रो मान्छे फिर्ता आउन हरेक एकल दिन खेल्न क्रम मा उनलाई केहि – हामी विश्वस्त छौं कि जस्तै तपाईं महसुस गर्नेछौं गरिरहेको! सँगसँगै ती 15 खेल, you ' ll also get एक पूर्ण संग्रह को सेक्स भिडियो मा हाम्रो ट्यूब क्षेत्र, फेरि समर्पित गतिविधिहरु को तातो foot. There are 3,000 अपलोड त्यहाँ, अब उपलब्ध मा 720p मा एक न्यूनतम संग, सबैभन्दा 1080p मा र पनि केही पूर्ण र 4K! हामी चाँडै सार्न ल्याउन तपाईं सबै भन्दा राम्रो tranny अनुभव गर्न ज्ञात मानिस: किन कि हामी छौं बाँकी भन्दा राम्रो र हरेक इरादा राखन को कुरा त्यो बाटो!
एक जादुई पोर्टल यौन परम
दुवै gameplay र ग्राफिक्स यहाँ साँच्चै ठूलो: यो जो एक निर्णय गर्न गाह्रो म मा ध्यान गर्नुपर्छ! मा ग्राफिक्स विभाग, हामी एक टीम3को मान्छे हो जो अत्यधिक विशेष खेल, साथै keen प्रशंसक को हिजडा शैली छ । तिनीहरूले काम मा 3D प्रतिपादन, दृष्टान्तहरू र यति मा को एकमात्र उद्देश्य को लागि हाम्रो खेल: अन्त परिणाम धेरै राम्रो हो विशेष भन्न धेरै कम से कम! हामी आशा हुनुहुन्छ भनेर अगाडी जाँदैछन्, हामी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, पनि ल्याउन एक मा केही बढी कलाकार थप्न विविधता र स्वाद गर्न विज्ञप्ति हामी प्रदान. अहिले gameplay विभाग – कि जहाँ म मा आउन!, म काम बनाउन यो खेल वास्तवमा समारोह र केटा छन्, तिनीहरूले राम्रो! यो छैन सिर्फ एक शैली खेल को या त: हामी मिल्यो छु रणनीति विज्ञप्ति, RPGs, डेटिङ सिमुलेटर र पनि केही आर्केड-शैली खेल हो कि सिद्ध तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ भने एक छिटो इनाम. म कुनै सन्त, but I wouldn ' t be surprised if I समाप्त मा स्वर्ग को गुणवत्ता लागि काम मैले गरेको छु यहाँ तल. यो नैतिक उच्च बनाउन stellar अश्लील खेल, सही? विशेष गरी जब तिनीहरूले छौं थीमाधारित वरिपरि transsexuals!
शुद्ध हिजडा पूर्णता
तपाईं पहिले नै छैन भने, यो बाहिर समझ, म विश्वस्त छु कि Tranny सेक्स खेल नम्बर एक गन्तव्य लागि अनलाइन हिजडा खेल प्रशंसक मा आफ्नो हात प्राप्त गर्न एक उत्पादन पूरा कि दुवै को आफ्नो fantasies. जबकि केही छन् कि ठाउँमा प्राप्त हुन सक्छ तपाईं नजिक के हामी प्रदान गर्न सामूहिक, कुनै एक गन्तव्य छ हाम्रो स्तर – कि बस एक वास्तवमा छ । We ' ve अनुसन्धान प्रतियोगिता र नरक, सम्पूर्ण कारण यो हब अवस्थित पहिलो स्थानमा छ किनभने हामी लिन आवश्यक, यस आला अर्को स्तर गर्न!, म छु थियो एक शानदार समय मा काम हाम्रो वेबसाइट र म खुसी छु भविष्यमा हामी मिल्यो छु योजना बनाए । त्यसैले, यदि तपाईं जस्तै महसुस आउँदै साथ र देखेर आफैलाई लागि कसरी कुराहरू जाँदैछन् जान सम्झना, एक खाता सिर्जना गर्न र प्राप्त भित्र! सारा प्रक्रिया लिन्छ सबै को 60 सेकेन्ड र, फेरि यो गर्न सम्पूर्ण मुक्त छ । तपाईं गुमाउन केही भयो जब तपाईं सामेल Tranny सेक्स खेल!
त्यसैले तपाईं के प्रतीक्षा गर्दै? क्लिक सामेल बटन, हात कि इमेल ठेगाना र प्राप्त गरौं तयार तपाईं को लागि दुनिया को tranny खेल को रुचि जो तपाईं मात्र गर्यौं को सपना देख्यो!